भुवनको दमदार नेपाली गीत आयो !::KhojOnline.com
भुवनको दमदार नेपाली गीत आयो !
सहयात्री फिल्मसले नया गीत बजारमा ल्याएको छ । भुवन बिश्वकर्मा र सर्मिला तामांगको स्वरमा रहेको गीतको भिडियो पनि बनेको छ । यस म्युजिक भिडियोलाइ एकराज थापाले निर्देशन गरेका हुन् । आहा रेलीमाई बोलको गीतमा मोडेलहरु दिलिप र सम्झौताले दमदार अभिनय गरेका छन । समाजमा पच्ने र मौलिक भाकामा रुचि राख्ने गायक भुवन भन्छन -‘नेपाली मौलिक लोक भाकामा रहेर काम गरेका छौ । सारी चोलोमा छमछम नाच्दै बादल बजाउदै गरेको भिडियो बनेका छ । सबैले रुचाउनु हुन्छ बिश्वास लिएका छौ । ‘ केसब अधिकारीको छायाकन दमदार छ ।